Ingiriiska Oo Bilaabay Ol’ole Caalamiya Oo Lagu Dhiirrigelinayo Maalgashiga Waafaqsan Shareecada Islaamka – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Published on Jan 14 2018 // Googooska Geeska
London (Geeska)- Wasaaradda Ganacsiga Caalamiga ah ee dalka Ingiriiska ayaa bilawday ol’ole ballaadhan oo caalamiya, kaas oo ay dunida oo ay ku jraan dalalka Bariga Dhexe iyo Khaliijku ku dhiirrigelinaya in ay maalgashi waafaqsan shareecada Islaamka ku sameeyaan dalka Ingiriiska.
Warbixin ka soo baxday xarunta warbaahinta iyo warisgaadhsiinta gobalka oo ay leedahay dawladda Ingiriisku, fadhigeeduna yahay magaalada Dubai ayaa lagu sheegay in in ka badan 20 bangi oo Ingiriis ahi ay bixiyaan adeegyo maaliyadeed oo Islaamiya, sida oo kalana ay jiraan shan bangi oo ku shaqeeya shareecada Islaamka, halka raasamaalka waafaqsan shareecada Islaamka ee ku jira dalka Ingiriiskuna uu dhan yahay 728 Milyan oo doolar.
Warbixintu waxa ay sheegtay in dalka Ingiriisku uu kaalinta 22 naad kaga jiro 124 dawladood oo dunida ka jira oo isticmaala nidaamka bangiyada Islaamiga ah, marka dhinaca Yurub la joogana uu noqonayo dalka Koowaad, halka dalka afaraad uu ka yahay marka la eego dalalka dunida ee dadkooda aanay muslimiintu ku badnayn, iyada oo ay ka horreeyaan oo keliya, dalalka Singapore, Siri Lanka iyo Koonfur Afrika.
Dalka Ingiriisku waa dalka ugu horreeya dalalka reer galbeedka dhinaca bangiyada Islaamiga ah, isla markaana magaalada London ayaa ah suuqa maalgashiga Islaamiga ah ee ugu weyn ee ka baxsan dunida islaamka. Waxa aanay warbixintani sheegtay in maalgashigii ugu dambeeyey ee Islaami ahi uu hadda ka socdo dalka Ingiriiska. Baniga Gita House ee ku shaqeeya nidaamka shareecada Islaamka ayaa wada maalgelinta in ka badan 6500 oo guri, oo ay ku baxayso lacag dhan 700 oo milyan oo Giniga dalka Ingiriiska ah.